လှိုင်သာယာ ငွေပင်လယ် ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း ဖော်ဆောင်မည့် စီမံကိန်း တည်ဆောက်မည့် အပေါ် မြေပိုင်?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်း ငွေပင်လယ်ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းဖော်ဆောင်မည့်မြေ နေရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် တောင်သူများက စီမံကိန်းတည်ဆောက်မည့်အပေါ် သဘောတူထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ တောင်သူ ၁၁ ဦးပိုင်ဆိုင်သည့် ၂၄၃ ဒသမ ၆၂ ဧကတွင် ငွေပင်လယ်ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း ဖော်ဆောင်ရန်ရှိပြီး စီမံကိန်းအတွက်မြေသိမ်းခြင်းကို ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
လှိုင်သာယာမြို့နယ် အလယ်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကွင်းအမှတ် (၃ဝဝ/ခ)နှင့် ကုန်းရွာကွင်းတို့ရှိ လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပုံစံ(၇) ရရှိထားသည့် တောင်သူငါးဦး၏ မြေ ၂ဝ၁ ဧကနှင့် ပုံစံ(၇)မရှိသေးသည့် တောင်သူ ခြောက် ဦး၏ မြေ ၄၂ ဒသမ ၆၂ ဧက၊ စုစုပေါင်း ၂၄၃ ဒသမ ၆၂ ဧကတွင် Dry Port စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ ကစီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ် တောနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဦးဟံထွန်းက ပြောသည်။ ဇွန် ၂၁ ရက် ရန်ကုန်လွှတ်တော်တွင် ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်းက စီမံကိန်းပြုလုပ်ရန်အတွက် မြေသိမ်းယူခြင်းကို မိမိပိုင်မြေစွန့်လွှတ်လှူဒါန်းပါကြောင်း
လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းသည်မှာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ညီ၊ မညီ၊ အဘယ်ကြောင့် မြေယာသိမ်းဆည်း ဥပဒေနှင့်အညီ မြေသိမ်းမိန့်ထုတ်ယူ၍သိမ်းယူခြင်း၊ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်သူ တောင်သူများအားဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အတိုင်း ငွေပေးဆောင်မှုရှိ၊ မရှိကိုမေးမြန်းခဲ့ရာဝန်ကြီးက အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြော ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တောင်သူ ၁၁ ဦးသည် လယ်မြေမှ မြို့မြေရရှိမည်ဖြစ်သည့်အတွက် အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်ကာ အစိုးရနှင့် လယ်သမား ၁၁ ဦးတို့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဦးဟံထွန်းက ပြောသည်။
”တောင်သူများအနေနဲ့ ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေများအားတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့အစီအစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရာ၌ မြို့မြေအဖြစ်ရရှိမည်ဖြစ်ရာ ၎င်းတို့အတွက် အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်နားလည်၍ မြေဧရိယာ ၂၄၃ ဒသမ ၆၂ ဧကတွင် လယ်မြေအား အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်ရရန် ဆောင်ရွက် ပေးပြီး စီမံကိန်းမြေအဖြစ်သုံးရန် ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းအားလည်းကောင်း လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သူများက လယ်မြေအား အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်ရရှိပြီး မြို့မြေအဖြစ် ၂ဝ နှုန်းပြန်လည်ရယူရန် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သဖြင့် မူလပိုင်ရှင်တောင်သူများမှ ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒဖြင့် ဝန်ခံကတိပြုလက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် စီမံကိန်းများကိုဖော် ဆောင်ရာတွင် မြေသိမ်းဥပဒေ၊ အမှုတွဲဖွင့်ရာ၌ ၁၈၉၄ ခုနှစ် မြေသိမ်းအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၁၊ အပိုဒ် (၃)အရ ကောလိပ်တော်အရာရှိသည် အကျိုးခွံစားခွင့်ရှိသူတောင်သူတစ်ဦးနှင့် အလဲအလှယ်ပြုလုပ်ရာတွင် အခြားသောမြေကို ဂရန်ထုတ်ပေးခြင်း(သို့မဟုတ်)ထိုသူ၏ အခြားမြေအတွက် စည်းကြပ်ထားသည့်အခွန်ကိုလျော်ပစ်ခြင်း(သို့မဟုတ်)သက်ဆိုင်ရာအကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူများအား မြေများပေါ် အကျိုးရှိစေမည့်အခြားသောနည်းဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သဘောတူညီချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ပြုလုပ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်ဟု ဖော် ပြပါရှိကြောင်း သိရသည်။ Dry Port စီမံကိန်းအတွက် မြေသိမ်းခြင်းကို အဆိုပါဥပဒေနှင့် အညီဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဦးဟံထွန်းက ပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်းက ”အလယ်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကွင်းအမှတ်(၃ဝဝ/ခ)နှင့် ကုန်းရွာကွင်းရှိ ၂၄၃ ဒသမ ၆၂ ဧကကို ငွေပင်လယ် Dry Port စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်လို့ ယင်းဧရိယာမှာပါဝင်တဲ့တောင်သူတွေနဲ့ တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ညှိနှိုင်းရာမှာ နိုင်ငံတော်က ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်း၊ တောင်သူက ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ညှိနှိုင်းခဲ့သော်လည်း အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံး အခြေအနေမှာ တောင်သူလယ်သမားတွေက ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုသို့လက် မခံစဉ်အချိန်ကာလတွေမှာ မြေ ပိုင်ဆိုင်သူတွေကို ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ Dry Port အစီမံကိန်းအတွက် မြေစွန့်လွှတ်လှူဒါန်းပါတယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်များရိုက်ကာ ယင်းစာချုပ်ပေါ်မှာ မြေပိုင်ရှင်တွေကို ခရိုင်အဆင့်လက်ထောက်ဌာနမှူးကနေ တာဝန်ခံစာလက်မှတ်တွေ ရေးထိုးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့လက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းလို့ မြေပိုင်ရှင်တွေကမထိုးခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာကြီးမှာ လက် ရှိမိမိပိုင်ဆိုင်ပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် နေတဲ့မြေနေရာတွေကို သဒ္ဓါတရားထက်သန်စွာနဲ့ အစိုးရကို လှူဒါန်းတယ်ဆိုတာ သဘာဝကျပါသလား” ဟု လွှတ်တော်တွင်မေးမြန်းခဲ့သည်။
ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အထူး ကိုယ်စားလှယ်၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် အပြုသဘောဆောင်၊ အရေးပါသည့် ?
ပြည်ထဲအရေး ပေါက် နှင့် ကျေး